Nke ị na-ahọrọ, Electric skuuta ma ọ bụ Skateboards - Jomo Technology Co., Ltd
Nke ị na-ahọrọ, Electric skuuta ma ọ bụ Skateboards
Ọtụtụ online echekwa nwere wee malite ịchụ àjà onwe adịzi scooters na hoverboards otu ugboro ọzọ. Silent skuuta eweta ezi uche ọnụ, praịm quality uzo-iwu, na Koowheel green electric scooters mbupụ Europe. The aka ma ọ bụ ụkwụ-ejikwara breeki kwe gị kwụsị skuuta ntabi nwusi itule. Na nke a arụmọrụ ị ga-enwe ike ịhapụ gị kwụsie ike skuuta nke anya na mgbe na-atụ egwu na e ga-agba ịnyịnya na ọ dị ka ọ na-agaghị na-arụ ọrụ ruo mgbe ị pịa bọtịnụ otu ugboro ọzọ. Ndị a na-wuru na nnọọ n'elu ụkpụrụ ndị a onwe ụgbọala ga-wuru, na ọ na-adịghị ihe ọ bụla nke na nche nchegbu na a ọnụ ọgụgụ nke ndị nta ụdị nwere. The scooters na-na-mere na yiri ụkpụrụ mgbe microprocessors dị ka a dochie anya nke uche ụgbọ mmiri-iriba-ama na moto.
Electric foldable Scooters pụrụ ọbụna ịdị nchebe karịa anyịnya igwe ebe ha na-emekarị ka nke siri ike plastic ihe na anyị agaghị na-eme ọtụtụ anụ ahụ mmegharị na nwere ike ime ka nwere ihe ọjọọ. Mgbe i nwere ike ga-agwụ agwụ na onye na-agba nkuzi mgbe ahụ ị nwere ike na-atọ ụtọ niile atụmatụ nke ngwa ahụ. Gịnị bụ nhọrọ nke kasị mma atọ skuuta maka ndị ntorobịa? N'ihi na na-eke nkwonkwo ndị ọzọ kwesịrị mkpakọ unan na ike ịkpata cartilage mmerụ na ogologo okwu mkpa, pediatricians atụ aro ala mmetụta omumu, karịsịa ibu ibu na-eto eto onye na nkwonkwo na-ama na ihe ize ndụ. Ònye chọrọ na-eje ije mgbe ị ga-enwe ike ife efe, kwesịrị ekwesị? Hoverboards nwekwara ike ịdị iche iche n'ime dịgasị iche iche nke wheel. Ọtụtụ ndị na-Ẹnam ekese kpọmkwem site China ga-achọ 7-12 ụbọchị na-abata n'ime United States. Ọ bụrụ na ị chọrọ ihe ngwa ngwa, ị nwere ike bulie hoverboard anyị esenidụt nkwakọba. Ezie na ọtụtụ ndị na-eto eto na ndị okenye na-eji ịnyịnya ígwè nwere n'ihu taya brek, n'azụ-taya braking bụ ọbụna odi mfe na-ebelata ihe ize ndụ nke onye nta a tụba n'ihu ebe nkwụsị ozugbo. Ya e na oke threaded na taya n'ihi na otu onye nke kasị mma management na Promotional na ihe fọrọ nke nta ọ bụla n'elu ala, ọbụna n'ụsọ oké osimiri! E nwere ihe ọzọ a obere remote management na-enyere gị aka ịchịkwa Electric skateboard .
Anyị na-na na nnoo kasị ọkachamara na ahụmahụ imewe ọrụ na oru, na anyị ọbụna nwere oké egwu ele mmadụ anya n'ihu patent nka, elu ego na ngwá na n'ichepụta isi nke ana achi achi nri ngwaahịa. E nwere nza nke siri eji a onwe-guzozie ngwá ọrụ na ngwaọrụ a na-eto ghọọ ndị kasị rịọrọ na kasị mma na-akwalite ezumike ịzụta mbipụta nke afọ a (2018). The kasị E1 na ukwuu acclaimed site na ọtụtụ na-eto eto. Dị nnọọ kwụpụ na, ị ga-enwe ike ka njem ya na nkeji, na-adị kwa ụbọchị na-amụ ịnya bụ naanị 3-5 nkeji. Ọ bụrụ na ị na-agba ike gwụrụ, ọ ga-apịaji. N'ihi ya, ọ bụ nnọọ adaba.
Ọzọ bụ wireless remote electric skateboard na replaceable Pu wheel Unique imewe ga-enyere Motors obi jụrụ maximumly Max Speed 42km / h, na n'ụwa nile na-eduga, etiwapụ na ọrụ dị na-atụle nke ndị mmadụ. Ndị ọrụ n'azụ a skateboard-akpọ ya " kacha electric skateboard ," anyị na-na na banyere ịhụ ihe mere. The KOOWHEL Electric Skateboard ugbu a na-abịa na sọrọ Motors! Electric skateboard ọzọ bụ na gburugburu ebe obibi enyi na enyi, mmezi o di na N'ezie nke amì awa. Ị nwere ike ịzụta a mapụtara batrị. ma ọ bụrụ na na, ị na-echegbu onwe ha banyere na-agba ọsọ nke batrị mgbe iji ya.
Post oge: Feb-01-2018